Masuuliyiin ka kala socda Puntland iyo Somaliland oo ku gaaray magaalo muran ka jiro – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wufuud ka kala socota maamulada Puntland iyo Somaliland ayaa gaaray magaalada Buuhoodle ee gobolka Togdheer, halkaasoo labada dhinac iyo Khaatumu isku heystaan.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiim Cumar Camey iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland ayaa maanta galinkii hore gaaray degmada Buuhoodle ee ka tirsan gobolka Togdheer.
Ciidammo kuwa deegaanka ah oo isugu jira Puntland iyo kuwa maamulka Khaatumo ayaa aad u adkeeyay amniga degmada Buuhoodle oo dhawaan ay ka dhici doonto munaasabadda caleema saarka Garaad C/risaaq Garaad Soofe.
“Halkan waxaan u imid ka qayb-galka caleema saarka Garaadka iyo in waxgaradka gobolka aan kala hadlo arimo muhiim ah “ayuu yiri madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiim Camey oo warbaahinta la hadlay markii uu gaaray Buuhoodle.
Sidoo kale waxaa maalmihii la soo dhaafay Buuhoodle ku sii qul-qulayay qaar kamid ah waxgaradka ugu caansan deeganada Soomaalidu dagto si ay uga qayb-galaan munaasbadan caleema saarka ah.
Dhanka kale, Wefti uu hogaaminayo Guddoomiye ku-xigeenka Golaha Wakiiladda Baashe Maxamed Faarax, oo ay wehelinayaan wasiirka wasaaradda Hawlaha Guud Cabdirisaaq Khaliif Axmed iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda Warfaafinta Cabdiwaaxid Cabdiraxmaan Cabdiqaadir ayaa maanta gaaray magaaladda Buuhoodle.
Wetiga Buuhoodle gaadhay ayaa ka qayb galaya caleemo saarka Garaad Cabdirisaaq Garaad Soofe Duraan oo maalinta barri ah lagu caleemo saari doono magaaladda Buuhoodle, waxaana si weyn waftiga ugu soo dhaweeyey magaaladda Buuhoodle dadweynaha deegaanka.
Wasiir xigeenka Warfaafinta ayaa saxaafadda u sheegay in si heer sare ah u qaabishay Weftiga uu ka midka yahay islamarkaana uu si aada ugu mahadcelinayo.
Wasiirka wasaaradda Caafimaadka Somaliland Dr: Saleebaan Ciise Axmed ayaa shalay isagu gaadhay magaaladdaasi, waxaanu dadweynaha Gobolka ugu baaqay inaanay siyaasadayn xafladda dhaqan ee Garaadka lagu Caleemo saarayo, isagoo ugu baaqay xafladda ka bacdi inay deegaanadooda ku noqdaan siyaasiyiinta maamul Goboleedyada kale ee kala qayb galayaa.
Garaad Cabdirisaaq ayaa badalaya aabihii Garaad Cabdulaahi Gaarad Soofe oo sanadkii hore ku geeriyooday magaalada Buuhoodle ,waxaana bilihii la soo dhaafay deeganaddaas ka socday qaban-qaabada munaasbadan.
Ugu danbayn, booqashada madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa noqonaysa tii ugu horeysay oo uu ku tago degmada Buuhoodle tan iyo markii loo doortay in uu madaxweyne ku xigeen ka noqdo maamulka Puntland.